Propagandy miha mafana Miantso fitoniana ny mpitandro ny filaminana
Nivory voalohany tetsy amin’ny toby Ratsimandrava Andrefanambohijanahary omaly ireo mpitandro ny filaminana maro isan-tsokajiny, notarihin’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa.
Zavatra telo loha no noresahin’izy ireo tamin’izany ka anisan’ireny ny fandriampahalemana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana solombavambahoaka izay hotontosaina ny 27 mey ho avy izao, manerana ny Nosy. Nambarany tamin’izany fa na dia eo aza ny fahasamihafan’ny hevitra sy ny fomba fijery dia tokony hitandro hatrany ny filaminana ny rehetra mba ho tombontsoan’ny besinimaro. Tsikaritra mantsy fa nisy ihany ireo nifampiantsy ady …ao anatin’izao fampielezan-kevitra izao. Hisy, araka izany, ny fiambenana hataon’ireo mpitandro ny filaminana any amin’ireo toerana misy ny biraom-pifidianana rehetra na ambanivohitra na an-drenivohitra. Ankoatra izay dia natsidik’izy ireo sahady ny fitandroana ny fandriampahalemana mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena 26 jona sy ny fahatongavan’ny Papa Ray Masina amin’ny volana septambra ho avy izao. Hohetsehina avokoa ny mpitandro ny filaminana rehetra ka ny tanjona dia ny hahafahan’ny Malagasy rehetra manao fety amim-pilaminana sy miatrika ireo vanim-potoana lehibe ao anatin’ny fitoniana tanteraka. Tsy voafetra moa ny isan’ireo mpitandro ny filaminana hiasa mandritra izany, raha ny fantatra hatrany.